Tsvaga kambani ye iPhone yako - Tsvaga opareta uye kana iri yemahara
Tsvaga iyo kambani ye iPhone yako
Pane ino peji iwe unogona kuwana chii kambani i iPhone yakondiko kuti, kune waanoshanda kwaanotanga kusangana. Uye zvakare, iwe unogona zvakare kuona kana ichienderana term contract kana kana yatove yemahara iPhone fekitori kana kusunungurwa.
Nenzira iyi unogona kuziva kana iyo iPhone yawakatenga kana iri kuronga kutenga inosangana nemamiriro awakaudzwa iwe uye kana achigona kuvhurwa neMIMI.
1 Tsvaga iyo kambani ye iPhone yako
2 Sei ndichida kuziva kuti ndeipi kambani iri iPhone kubva?
Shandisa inotevera fomu kuti uzive anoshanda weiyo iPhone yako:
Iwe unozogashira iyo data rese kubva kune yako iPhone mune iyo email inosanganisirwa neako Paypal account kana iyo email iyo yaunonyora kana iwe uchibhadhara nekadhi rechikwereti. Kazhinji iwe unogashira ruzivo mukati memaminitsi mashanu kusvika gumi nemashanu, asi mune zvimwe zviitiko panogona kuve nekunonoka kunosvika kumaawa matanhatu.
Chirevo chauchatambira chichafanana neichi:
Nhamba yeNhamba: AB123ABAB12
Muenzaniso: IPHONE 5 16GB BHUKU
Anoshanda: Movistar Spain
Mahara: Kwete / Hongu
Nechibvumirano chenguva dzose chakabatana: Kwete / Hungu, kusvika Chivabvu 16, 2015
Kuti uzarure iPhone yako unofanirwa kuita zvinotevera / Iwe haugone kuvhura yako iPhone
Zvakare kana uchida iwe unogona zvakare kutarisa kana yako iPhone yakakiyiwa ne IMEI Nokusarudza iyo muripo kudonhedza-pasi, iwe unongofanira kubhadhara € 3 kana $ 4 imwe chete.
Sei ndichida kuziva kuti ndeipi kambani iri iPhone kubva?
Izvo zvakakosha kwazvo kuziva kuti ndeipi kambani yawakabatana nayo, uye ndeyekuti kana a iPhone inongobvumirwa kune mumwe anotakura, Tinogona kungoishandisa chete nekambani kwayiri. Neiyi nzira, zvingave zvinorema kutora yechipiri-ruoko iPhone iyo yanga isina kubatana nekambani yenhare yatiri kushandisa parizvino, mukuwedzera, Izvo zvekuti mudziyo wakasununguka ndewekuwedzera kukosha kwawo, sezvo tichigona kuchinjana pakati pekambani dzakasiyana dzenhare mbozhanhare dzinotipa makwikwi emitengo, saka tinopedzisira tachengeta chitsama chemari.
Ndezve izvi zvese kuti sevhisi yedu inokutendera iwe kuti uzive zviri nyore zvese data maererano ne iPhone, kusanganisira anoshanda iyo ndeyayo. Nenzira iyi iwe unogona kudzivirira zvinogona kuitika zvingangodzokera kubva kukambani yenhare iyo iyo chishandiso chakabatana. Usanonoka zvakare, uye tora mukana weatinopa.